Antimony ho an'ny maso
Hatsarana sy fahasalamana Makiazy
Amin'ny fotoana rehetra, ny fijery vehivavy dia afaka manindrona ny fon'ny olona iray ary mandresy azy mandrakizay. Ny maso lehibe sy mendri-piderana no tena tanjon'ny vehivavy rehetra. Nisy Cleopatra hafa nalaza eran-tany nijery an'i Antimony. Any atsinanana, ny lehilahy dia tsy mahazo mahita afa-tsy ny mason'ny vehivavy. Izany no mahatonga ireo vehivavy atsinanana hampihatra loko antimony manokana eo amin'ny volony amin'ny volom-borona.
Ny antimony no mahatonga ny maso ho maivana kokoa sy bebe kokoa. Any atsinanana dia inoana fa manampy amin'ny ady amin'ny aretina amin'ny areti-maso ity fanafody ity, miaro azy amin'ny masoandro mamirapiratra ary manatsara ny masony. Ny antimony dia tsy manana antontan'isa sy daty fandroana. Ity dia vokatra ara-boajanahary sy azo antoka kokoa noho ny eyeliner kosmetika tsy fantatra.
Karazana antimony ho an'ny maso
Ity fitaovana ity dia azo jerena amin'ny endriny maromaro, ny tsirairay dia manana tombony manokana:
Vovoka. Ny fampiharana antimony amin'ny alina dia tena ilaina, satria manatsara ny masony izany ary manamafy ny fitomboan'ny volom-borona. Ankoatr'izay, ny fampiharana ny antimony dia manampy amin'ny fanafoanana ny reraka amin'ny maso. Azonao ampiasaina isan'andro izany. Tsy sarotra ny manadio ny vovoka, afaka atao amin'ny alalan'ny savony tsotra na ny fo mba hanasana azy.
Ny antimony dia miorina amin'ny menaka manda, matetika miaraka amin'ny fanampin'ny basma. Io safidy io dia tena tsara ho an'ny endriky ny masoko. Mamelona ny hoditry ny hodi-maso ny menaka, ary ny basma dia mikarakara ny volom-borona.
Antimony pensilihazo. Amin'ny ankapobeny, ny pensilihazo antimony dia vita amin'ny fanampin'ny menaka oliva. Ny fananganana antimony amin'io endriny io dia hivoaka ho maimbo sy ho maina. Saingy tsy hisy ny fiparitahana izany fiantraikan'ny fahamendrehana izany, mba hahafahanao mandany andro tsy tapaka mandritra ny andro manontolo. Tena mora ny manasa azy, afaka ampiharina isan'andro ianao.
Antimony miaraka amin'ny famonoana menaka kamboty sy trondro samihafa. Azo ampiasaina hanamaivana ny reraka amin'ny maso. Tena tsara ny mampiasa azy amin'ny maso izay mihenjana foana.
Ny endrika malaza indrindra amin'ity vokatra ity amin'izao fotoana izao dia vovony mainty miaraka amin'ny fanampiana ny kamera. Mampandroso ny fitomboan'ny volom-borona, manampy amin'ny fanesorana ny fitsaboana amin'ny maso. Alohan'ny fampiasana dia mila mofomamy ilay tapa-kazo, ary ny vovony dia afaka mifikitra aminy. Azo atao ny mampiasa ny antimony ara-pahasalamana isan'andro. Ilaina ny mampihatra vovo-dronono ho an'ny hoditra manontolo sy amin'ny lavany manontolo. Raha tonga tampoka amin'ny tsiranoka ny plastika dia aza manahy, fa ilaina ihany koa. Ataovy ao an-tsaina fa hanokana fotoana hampiasana izany antimony izany. Ho fandaniam-poana ianao rehefa tonga eo amin'ny tranom-biriky moka, dia hihatsara ny ranomaso ary hanomboka ny ranomaso mafy.
Ahoana ny fampiasana antimony?
Na dia efa fantatry ny ankizivavy maro aza ny antimony, fa ny fomba fampiasana azy marina, tsy ny rehetra no mahalala. Sarotra arabo ny sarina Arabo tsy misy mason-tsivana. Ny antimony dia azo ampiasaina amin'ny fananganana sehatr'asa, satria ilaina ny famirapiratana sy ny faharetany manokana. Hevero ireo hevi-dehibe momba ny fampiharana ny tarehimarika Arabo sy ny fampiasana antimony ho toy ny tara-maso ho an'ny maso:
Sarotra ny maka sary an-tsaina ity sary ity raha tsy misy ny felam-boninkazo volamena na trompetra, tokony hisy volamena betsaka ary hamirapiratra;
Mitovy ny fomba fijerin'ny maso toy ny tany Ejipta fahiny, nosoritan'i Cleopatra, fa ny manao azy tsara kokoa;
asio boribory ny masonao, andramo mba hanome endrika azy amandrihana;
Tena tsara tarehy ny loko volamena sy ny loko ôlekitra, ary koa maivana mainty sy maitso maitso;
Aza adino ny manintona ny ala mainty maitso, amin'ny alàlan'ity tetika ity no tratrarina ny fahantrana sy ny misterin'ny fahitana atsinanana;
Ny mascara dia tsara kokoa ny maka mainty, mampihetsi-po roa na telo loko;
Ny lokon'ny lipstick dia tsara kokoa ny mifidy loko mafana sy voajanahary.
Ahoana ny fisafidianana pensilihazo ho an'ny ati-maso?
Kitapom-bolo - inona no atao?
Mahaiza mifaninana - dingana isan-kerinandro
Tsara tarehy maso
Manaova lantom-peo mena ho an'ny brunettes
Akanjo mahafinaritra ho an'ny maso manga
Asehoy ny lamaody na ny fomba hisintonana anao?
Ahoana no hanerena olona hamerina trosa?
Mila visa iray any Maraoka ve aho?
Toeram-pialamboly any amin'ny Repoblika Tseky
Mofo Mofo ho an'ny Hair
Fanamboarana akanjo maitso
Ny fampifangaroana maitso ao anatiny
Kaomandà na fiainana: 25 mofomamy mahafinaritra ho an'ny Halloween
Inona no nofinofin'ny nify?
Brown ao anatiny
Hanozongozona, NW-Ottoman kitapo
Antipyrétique ho an'ny fihomehezana
© 2020 mg.everaoh.com